‘हाम्रो अनि राम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका बनाउने मेरो सपना हो ।’ यो र यिनै सपनाका खाका लिएर चुनावी मैदानमा छन्,– जीवन खत्री । जीवनलाई नेपाली कांग्रेसले चाँगुनारायण नगरपालिकाका लागि मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । विद्यार्थी कालदेखि नेविसंघ हुँदै कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका जीवन चाँगुबासीका लागि नौलो अनुहार भने होइनन् । तर, मतदाताले उनले देखेको सपना साकार पार्ने मौका देलान् ? नतिजा कुर्न बाँकी छ । यद्यपि, उनी आफ्नो जित सुनिश्चित भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘म शासक होइन जनताको सेवा गर्न आएको हुँ,’ उनी दाबीका साथ भन्दै थिए, ‘यो नगरपालिकालाई विश्वसामु चिनाउने खाका पनि मैले कोरिसकेको छु, त्यसैले मलाई आम मतदाताले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।’
चाँगुनारायणलाई समृद्ध, विकसित र नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न मेरो उम्मेदवारी हो ।
२०५५ मा बिबिएस अध्ययनका लागि भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस छिरेका जीवनको राजनीतिक यात्रा यहीँबाट सुरु हुन्छ । कांग्रेस परिवारमै जन्मिएका उनलाई नेबिसंघको फेरो समात्न कुनै गाह्रो भएन । संयोग पनि कस्तो । उनी भक्तपुर क्याम्पस छिर्नु र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियू)सँग जोडिनुले उनलाई राजनीतिमा अघि बढ्न सघायो । भक्तपुर क्याम्पसमा नेविसंघको तर्फबाट स्ववियू सदस्यको उम्मेदवार बने । विजेत पनि भए । ‘मैले राजनीतिको रस थाहा पाएको त्यहीबेलादेखि हो,’ उनी आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुनाउँदै थिए, ‘स्ववियू सदस्यमा २ वर्ष काम गरेँ, २०५७ मा स्ववियू सभापति बनेँ ।’
जीवनले विद्यार्थी राजनीतिमा छलाङ मारे । २०६० मा उनी नेविसंघ भक्तपुरको सभापति भए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थीको नेतृत्व गरेका जीवन २०६४ मा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य बने । यहीक्रममा कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन नजिकियो । जीवन विद्यार्थी राजनीति छोडी पार्टी राजनीतिमा होमिए । १२ औं महाधिवेशनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय सचिवमा निर्वाचित भए । १३ औं महाधिवेशनमा सोही क्षेत्रको सभापति बने । २०७४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले उनलाई भक्तपुरको प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनायो । झिनो मतान्तरले पराजित भए तर, आजित भएनन् । राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । १४ औं महाधिवेशनमा पुनः क्षेत्रीय सभापतिको रुपमा निर्वाचित भइ आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अघि बढाइरहेका छन् ।
खत्रीसँग मेरोलाइफस्टाइलका लागि महेश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयरमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
चाँगुनारायणका मतदाताको मन जित्न तपाईंका योजना के–के छन् ?
भक्तपुरको उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको यो नगरपालिकाले साँस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ । राजधानीकै छेउमा रहेर पनि यस नगरपालिकाका नागरिकको जनजिविका अत्यन्तै कष्टकर छ । त्यसलाई सहज बनाउन खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने छ,जो मेरो प्राथमिकतामा छन् । साथै, नगरपालिकालाई विश्वभर चिनाउने खाका पनि कोरिसकेको छु ।
हाम्रो नगरपालिकाभित्र देशकै ठूलो विर अस्पताल बन्दैछ । त्यसको निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न प्रयत्न गरी नगरबासीको सेवामा लागिपर्ने छौं । त्यस्तै, नगरभित्र स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन अध्यापन हुने शैक्षिक संस्था खोल्ने मेरो योजना रहेको छ ।
समाजमा शिक्षित नागरिक भएमात्र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसैले म निर्वाचित भएँ भने ‘एक घर, एक स्नातकोत्तर’ अवधारणा अघि सारेर दक्ष अनि शिक्षित समाज निर्माण गर्नेछु । यसैगरी, यहाँका जिर्ण रहेका सडकलाई स्तरोन्नती गरी सम्पूर्ण नगरबासीमा यातायातको पहुँच पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ । नगरबासीको अर्को समस्या भनेको खानेपानीको हो । हामीले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि महादेवखोला बहुआयामिक परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
त्यसैगरी, नगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले बैंकमार्फत झन्झटिलो र बोझिलो तरिकाले वितरण भइरहेको छ । हामी स्थानीय तहमा पुगिसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई घर–घरमा पुगेर भत्ता वितरण गर्नेछौं । त्यस्तै, खेलकुदतर्फ पनि हाम्रो नगरपालिका पिछडिएको छ । यहाँका युवा जनशक्तिलाई खेलकुदमा प्रोत्साहित गरी नयाँ र प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादन गर्नेछौं । चाँगुनारायण पर्यटनमा ठूलो सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो । यहाँको नगरकोट, चाँगुनारायण, कल्पेश्वर महादेव लगायतका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी नगरबासीलाई स्वरोजगार बनाउने मेरो लक्ष्य छ ।
जब निर्वाचन आयो त्यतिबेलामात्र नेताहरु जनतासामू आउँछन्, मत लिएर गएपछि फर्केर आउँदैनन् भन्ने आम मतदाताको गुनासो पाएँ । उहाँहरुको गुनासो स्वभाविक हो ।
नगरपालिकाभित्र विभिन्न खानी छन् । तिनीहरुको कानून तथा नीति नियम बनाइ सहज तरिकाबाट स्थानीयले उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउनेछु । यसैगरी, हाम्रो नगरपालिकाभित्र देशकै ठूलो विर अस्पताल बन्दैछ । त्यसको निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न प्रयत्न गरी नगरबासीको सेवामा लागिपर्ने छौं । त्यस्तै, नगरभित्र स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन अध्यापन हुने शैक्षिक संस्था खोल्ने मेरो योजना रहेको छ ।
मेयर पदमा जित्नुभयो भने तपाईंले पहिलो काम के गर्नुहुन्छ ?
पहिलो काम नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सरल, विना भेदभाव र पूर्वाग्रहरहित ढंगले प्रदान गर्ने तारतम्य मिलाउनेछु । चाँगुनारायणलाई सुशासन, समृद्धि र आर्थिक पारदर्शिताको नगरपालिका बनाउने मेरो सपना हो ।
यतिबेला घरदैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, मतदाताहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
मेरो उम्मेदवारीप्रति मतदाताहरु निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । तर, जब निर्वाचन आयो त्यतिबेलामात्र नेताहरु जनतासामू आउँछन्, मत लिएर गएपछि फर्केर आउँदैनन् भन्ने आम मतदाताको गुनासो पाएँ । उहाँहरुको गुनासो स्वभाविक हो । म घरदैलोमा गइरहँदा आम मतदाताहरुले हाम्रो मतको सम्मान होस्, हामीले जुन उद्देश्यले मतदान गर्दैछौं । त्यसमा विगतका नेतृत्वले जस्तो नागरिकलाई धोका दिने, विश्वासघात गर्ने काम नगर्नु, शासक होइन सेवकको रुपमा काम गर्नु भन्दै आशिर्वाद पनि दिनुभएको छ ।
यो भन्दा अघि नगरपालिकालाई विकास र समृद्धिका नाममा दिर्घकालिन योजना नबनाइ हचुवाको भरमा व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने उद्देश्यले जसरी लुटियो,अब कांग्रेस विजयी भएको खण्डमा त्यो लुटको परम्परा टुट्नेछ ।
तपाईंले टिकट पाएकोमा कांग्रेसका आकांक्षीहरुको असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
कांग्रेसको तर्फबाट हाम्रो नगरपालिकामा ९ जना मेयरका आकांक्षी थियौं । तर, जसले टिकट पाएपनि कांग्रेस जिताउन र चाँगुको मुहार फेर्नका लागि लाग्ने प्रण गरेका थियौं । अन्तिममा मैले टिकट पाएँ । त्यसैले कसैले विरोध गर्नुभएन । हामी एक छौं, बलियो छौं ।
पाँच वर्षपछिको चाँगुनारायण नगर कस्तो हुन्छ ?
‘हाम्रो अनि राम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका’ बन्नेछ । यो भन्दा अघि नगरपालिकालाई विकास र समृद्धिका नाममा दिर्घकालिन योजना नबनाइ हचुवाको भरमा व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने उद्देश्यले जसरी लुटियो,अब कांग्रेस विजयी भएको खण्डमा त्यो लुटको परम्परा टुट्नेछ । विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता हुनेछ । अब पाँच वर्षपछि देशभरका नागरिकको केन्द्रविन्द्रु चाँगुनारायण नगरपालिका हुनेछ ।
भिडियो : किरण स्याङ्बो/मेरो लाइफस्टाइल
‘पाँच वर्षसम्म इमान्दार भएर गरेको विकासका काम नै मेरो जितको आधार हो’ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle